Izisombululo-I-AOOD Technology limited
Itekhnoloji yokunxibelelana yeklasikhi ye-AOOD yenziwa ngokunxibelelana kweqela elithile leengcingo zebrashi kunye nebhanti eqhubayo okanye isangqa esinyuswe kwishafti. Inamandla amakhulu, uphawu kunye nokudluliswa kwedatha, ngakumbi igolide ekunxibelelaneni negolide inokujongana nomqondiso obuthathaka okanye ukuhanjiswa kwedatha ngesantya esiphezulu kunye nokugcina ukuthembeka okuphezulu. Isilivere ekunxibelelaneni nesilivere inokuhlangabezana nemfuno yexabiso eliphantsi lokuhambisa umbane ngokuthembekileyo.
Kwiskena se-CT, sidinga iringi yesiliphu enkulu ngokubhola ukuze kuqinisekiswe ukuhanjiswa kweedatha eziphezulu phantsi kokusebenza ngesantya esiphezulu. Iinjineli ze-AOOD ziphuhlisa itekhnoloji yokuhambisa enganxibelelanisi nalezi zicelo. Amakhonkco esliphu angaqhakamshelani anikezela ngesantya esiphezulu samandla okanye ukudluliswa kwedatha ngaphandle kokugcinwa kunye nobomi benkonzo obude kuneebrashi eziqhelekileyo ezinxibelelana namakhonkco esiliphu.
Iiringi ezijikelezayo zoQhakamshelwano neTekhnoloji
I-AOOD itekhnoloji entsha yokuqengqeleka kwamakhonkco yamkela amakhonkco aqhakamshelana nokunxibelelana ukuze aqonde ukwenziwa kokusebenza kwesangqa esityibilikayo, esisebenzisa amakhonkco entwasahlobo obhedu alekwe ngegolide ebekwe phakathi kwemijelo yentsimbi exabisekileyo emibini endaweni yokunxibelelana ngokwesiko. Inokuxhathisa kokunxibelelana okuncinci, ukunxiba okuphantsi, ingxolo esezantsi ye-elektroniki, ixesha elide lokuphila kunye namandla aphezulu okuhambisa ngoku. Isisombululo esisisilingi esifanelekileyo kwezi nkqubo zifuna ubungakanani obukhulu, amandla aphezulu ngoku kunye namakhonkco esiliphu ixesha elide. I-AOOD yokuqengqa-iringi yokunxibelelana namasongo esiliphu enza umsebenzi wawo ogqwesileyo kwezonyango, kwezokhuselo, kubhabho kunye nokusetyenziswa kokuhamba.
I-AOOD i-mercury slip slip amakhonkco zisebenzisa iphuli ye-mercury e-molekyuli ebotshelelweyo kubafowunelwa endaweni yokunxibelelana ngokwesiko kwebrashi. Umgaqo wabo wokunxibelelana ohlukileyo uqinisekisa ukuba banokugcina ukumelana okuphantsi kunye nonxibelelwano oluzinzileyo phantsi kwesantya esiphezulu sokusebenza, kwaye bayakwazi ukudlulisela ukuya kwi-10000A yangoku ngepali nganye. Uninzi lwamakhonkco e-AOOD aphezulu ngoku asebenzise oomatshini bentsimbi.
Ukuhanjiswa kwefiber optic kwazalwa ngamaqondo aphezulu edatha. Itekhnoloji ye-AOOD ye-fiber optic inokuqinisekisa ukuya kuthi ga kwi-10 Gbit / s yedatha yamaxabiso nangaphantsi kweemeko ezigabadeleyo. Amalungu ajikelezayo e-fiber optic ajikelezayo akhiwe ngomzimba ongenazintsimbi kunye nokukhuselwa kwe-IP68, inokusetyenziswa phantse kulo naluphi na uhlobo lwezicelo ezivela kwizixhobo zonyango, ii-ROVs ukuya kwiiradar zokujonga ezomkhosi. Ukudluliselwa kwefayibha kungadityaniswa kunye nesilayidi sokuqhagamshela isangqa sokudibanisa isiliphu ukuhlangabezana nemfuno yeesistim ze-electro-optic hybrid slip systems.
I-AOOD ibonelela ngesisombululo esigqithisileyo sokuhambisa rhoqo phakathi kweqonga eliqingqiweyo kunye neqonga elijikelezayo, njengeekhamera zeTV, izithuthi zomoya ezingagunyaziswanga kunye neenkqubo zeradar. I-AOOD ivumela ukuhanjiswa komqondiso kuluhlu oluhamba rhoqo ukusuka kwi-DC ukuya kwi-20GHz, indibaniselwano ejikelezayo ye-HF inokudityaniswa kwisazinge sombane njengoko kufuneka.
Imanyano yeRotary Union
I-AOOD ibonelela ngesisombululo sokuhambisa imithombo yeendaba ngokuhambisa ulwelo okanye iigesi ukusuka kumthombo osisigxina ukuya kumthombo ojikelezayo ngelixa uvumela ukuhamba. Imibutho yabasebenzi ejikelezayo yemithombo yeendaba isetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo ukusuka kwiitafile zokwenza isangqa sokufowunela ukujikelezisa iitalente zokwenza isinyithi kwizixhobo zehlathi. Isangqa esityibilikayo, ifayibha yokujikeleza i-fiber optic edibeneyo, idibeneyo ye-HF ejikelezayo kunye nekhowudi enokudityaniswa kwinkqubo yomanyano olujikelezayo. Nokuba ufuna izisombululo ezithile zoxinzelelo oluphezulu, isantya esiphezulu sokusebenza okanye ubungakanani bokuhamba okuphezulu, cela umngeni ku-AOOD.